"चयन" को अवधारणा को संस्थापक आनुवंशिक विविधता र सिर्जना मा कृत्रिम चयन र नयाँ जातिहरु र किसिमहरु को विकास को भूमिका वर्णन गर्न सक्षम थियो चार्ल्स डार्विन छ।
चयन के हो
रूपमा formulated परिभाषा निम्नानुसार: "प्रजनन - सिर्जना र किसिमहरु को सुधार को लागि विधिहरू अध्ययन हो क्रप बिरुवाहरु को, जनावर को जातिहरु र सूक्ष्मजीवहरु को उपभेदों।"
लाभप्रद वंशानुगत विशेषताहरु, उच्च उत्पादकत्व छ, यो छ आवश्यक शारीरिक र morphological मापदण्डहरू: - विविधता वा नस्ल यो मानिसले बनाएको कृत्रिम अवस्था व्यक्ति लागि अमूल्य लाभ छ जो जनसंख्या छ।
चयन (यो मतलब के - जीव को एक विस्तृत अध्ययन), जो केवल एक मानिस खर्च गर्न सक्छन् कृत्रिम चयन, परिणामस्वरूप, बाली को नयाँ प्रजातिहरू घरेलू पशु जातिहरु को उपस्थिति, साथै द्वारा विशेषता।
सांस्कृतिक प्रकारका तिनीहरूले शरीर प्राकृतिक वातावरणमा अवस्थित गर्न गाह्रो छ, जो संग धेरै कडा विकास केही गुण छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा विशेषता छन्, तर तिनीहरू मानिसहरूलाई उपयोगी छन्। एक हडताली उदाहरण तीन सय एक वर्ष चिकन अन्डा गर्ने क्षमता छ। प्रकृति मा, चरा को एक सुविधा चिकन तीन सय अन्डा बाहिर बस्न सक्षम हुनेछ देखि छैन, व्यर्थ छ।
यसको अस्तित्व को सुरुमा, यो प्रजनन को कृत्रिम चयन को विधि थियो। के धेरै वर्ष को श्रमसाध्य काम, एक विशेष उपयोगी सुविधा प्राप्त उद्देश्य छ - तिनीहरूले केवल प्रजनकों थाहा छ। को सत्रौँ शताब्दीमा अघि, प्रजनन चयन अचेत थियो। उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति बोट पहिले नै एउटा व्यक्तिको लागि सही दिशा मा परिवर्तन छ कि सोच बिना राम्रो फसल प्राप्त गर्न सबै भन्दा ठूलो बीउ छनोट।
र केवल एक सय मानिसहरूलाई पछिल्लो वर्ष, अझै पनि सिद्धान्त र जेनेटिक्स को व्यवस्था अध्ययन बिना थाले purposefully र जानाजानी सर्वश्रेष्ठ पूरा भनेर मानव चाहन्छ र आवश्यकता जस्तै बोट पार।
तर केवल कृत्रिम चयन गरेर, मानिस जीवित जीव को नयाँ प्रकारका सिर्जना गर्न सकेन। यो विधि प्रयोग गरेर, तपाईं मात्र ती जीनोटाइप जनसंख्या पहिले नै अवस्थित छ कि चयन गर्न सक्नुहुन्छ। हाल संकरण, हामीलाई पूर्णतया नयाँ बिरूवा प्रजातिहरू र पशु जातिहरु प्राप्त गर्न अनुमति प्रयोग किन भन्ने छ।
बोट प्रजनन के हो
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चयन को विधिहरू बिरुवाहरु को संकरण र चयन छन्। क्रस-pollinated बिरुवाहरु लागि प्रयोग को एक विशाल चयन इच्छित गुणहरू। अन्यथा, तिमी अगाडी कामको लागि आवश्यक सामाग्री प्राप्त गर्न सक्दैन। यो विधिमा धन्यवाद, क्रस-pollinated बिरुवाहरु को नयाँ प्रजातिहरू उपलब्ध (जस्तै राई) छन्। यस्तो प्रजातिहरू आनुवंशिक homogeneous छन्। तर वैज्ञानिकहरू शुद्ध लाइनहरु को लागि आत्म-pollination फलस्वरूप आवश्यक विशेषताहरु र सुविधाहरू उच्च गुणस्तरीय प्रतिहरू प्राप्त गर्न सम्भव छ, जसको समयमा व्यक्तिगत चयन, प्रयोग गर्नुहोस्।
बोट प्रजनन लागि धेरै प्राय रूपमा polyploidy प्रत्येक उच्च उपज, ठूलो आकार र अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि द्वारा विशेषता छ, प्रयोगात्मक polyploidy प्रयोग गरिन्छ।
Vavilov छलफल भएको थियो जुन कृत्रिम mutagenesis, एक विधि पनि छ। शरीर, एक उत्परिवर्तन yielding र नयाँ गुणहरू, भनिन्छ उत्परिवर्ती, र परिवर्तन को प्रक्रिया छ - उत्परिवर्तन।
विशेष गरी पशु प्रजनन
के छ जनावरहरूको चयन - जवाफ गाह्रो छैन। यो बोट प्रजनन धेरै समान छ, तर अझै पनि केही peculiarities छ। पशु मात्र यौन प्रजनन को विशेषता हो भनेर नबिर्सनुहोस्। कारण धेरै दुर्लभ generational परिवर्तन (केही वर्ष पछि धेरै जनावर मा) गर्न, अत्यन्तै सानो को सन्तान मा व्यक्तिहरूको संख्या। , प्रजनन काम सञ्चालन वैज्ञानिकहरूले सबै बाह्य एक निश्चित जात को विशेषता सुविधाहरू विश्लेषण गर्न आवश्यक छ किन कि छ।
जीव मा चयन के हो? परिभाषा स्कूल पाठ्यक्रम मा दिइएको छ। मानिसजातिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दस अधिक हजार वर्ष पहिले जंगली जनावर को domestication थियो। यसरी, मान्छे खाना को स्थिर स्रोत हुनेछ।
पाल्तु जनावर अक्सर प्राकृतिक अस्तित्व लागि हानिकारक छन् कि विशेष सुविधाहरू उपस्थिति द्वारा विशेषता, तर एक व्यक्ति लागि अमूल्य सकारात्मक मूल्य हो। domestication को कारक मानव आवश्यकता पूरा गर्ने व्यक्तिहरूको कृत्रिम चयन छ। मान्छे राम्रो दृश्य, एक शान्त चरित्र र एक व्यक्ति को अन्य महत्वपूर्ण गुणस्तर थियो कि जनावर चयन गर्नुहोस्।
एक पटक अचेत methodical चयन देखियो। आफ्नो लक्ष्य - पशुहरू आवश्यक र उपयोगी गुणस्तर सिर्जना गर्न।
आज मानिस गर्ने नयाँ जनावर विधि को domestication। यसले, उदाहरणका लागि, उच्च गुणस्तरीय furs उत्पादन हुनुपर्छ। त्यसैले, उद्योग को नयाँ शाखा - फर खेती।
क्रस-प्रजनन र चयन
चयन (यो मानिसजातिको लागि के अर्थ - तपाईं यो लेख पढेर सिक्न सक्छौं) यस्तो क्रस-प्रजनन जनावर रूपमा व्यवहार र विधि। यो उपस्थिति, गुणस्तर मासु वा दूध बोसो वृद्धि सुधार गरेको छ। नस्ल छन् व्यक्तिहरूलाई आफ्नो उपस्थिति मा, तर पनि आफ्नो सन्तान गुणस्तर मात्र मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यो किन यो आफ्नो वंशावली अध्ययन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
inbreeding र outbreeding: क्षणमा Crosses दुई प्रकारका छन्। पहिलो प्रकार व्यक्तिहरूलाई केवल एक, तर फरक जातिहरु को पार गरेर विशेषता छ। थप कडा चयन उपयोगी गुणहरू कायम गर्न र सन्तान आफ्नो नम्बर वृद्धि गर्न सक्षम छ।
प्रयोग आमाबाबु र सन्तान वा भाइ बहिनी inbreeding समयमा। कारण यो पार गर्न homozygosity वृद्धि र सन्तान मा मूल्यवान गुण सुरक्षित छ।
किनभने interspecific संकर को सबै भन्दा infertile जनावर हो संकरण, एक अपेक्षाकृत कम प्रभाव छ।
मानकीकरण को वस्तुहरु को एक चयन के हो? यो अवधारणा मानव जीवन को सबै क्षेत्रहरू आफ्नो थप उत्पादन र प्रयोगको लागि फिट फेला, केही वस्तुहरु को चयन छ कि गतिविधि वर्णन गर्दछ।
सूक्ष्मजीवहरु मानव जीवनमा जीवमण्डल Name महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न र सीधा। मानिसजातिको सूक्ष्मजीवहरु सयौं प्रयोग गर्दछ, र आफ्नो नम्बर हरेक वर्ष बढ्दै छ।
सूक्ष्मजीवहरु को चयन धेरै सुविधाहरू द्वारा विशेषता छ। ब्रीडर्स भण्डारमा सामाग्री को असीमित रकम छ। कुनै पनि जीव haploid को जीन देखि वैज्ञानिकहरूले पहिलो पुस्ता मा उत्परिवर्तन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जीवाणु जीन को एक अपेक्षाकृत सानो नम्बर, र यसैले धेरै सजिलो र छिटो काम पूरा गर्न।
जीवाणु स्वतन्त्र मानव पदार्थ गर्न लाभदायी उत्पादन गर्न सक्छन्, र यो आफ्नो सम्पत्ति सूक्ष्मजीवहरु को एक चयन प्रयोग छ। उद्योग यसलाई मा आनुवंशिक ईन्जिनियरिङ् को विधि के हो? Vivo मा उत्पादन जुन यी यौगिकों, उत्पादन जीवाणुहरु प्रोभोकिंग कार्यहरू यस सेट,।
कहिलेकाहीं transduction प्रयोग प्रजनकों - अर्को चाहेको डीएनए एक जीवाणु देखि हस्तान्तरण गरिएको छ, र यसरी वातावरण लागि सूक्ष्मजीवहरु को महत्व बढ्छ।
चयन एउटा महत्त्वपूर्ण विधि सूक्ष्मजीवहरु काम - विभिन्न उपभेदों को संकरण। यो विधि तपाईं प्रकृति मा उत्पन्न गर्न सक्दैन भनेर सामाग्री संयोजन गर्न अनुमति दिन्छ।
को प्रजनन काम बाहिर रूपमा
जीव मा चयन के हो? सङ्कल्प तपाईं नयाँ र सुधारिएको प्रजातिहरू, उपभेदों र जीवित जीव को आबादी सिक्न गर्न अनुमति दिन्छ। मिति, सबै प्रजनन काम बाहिर छ खातामा तथ्यलाई लिएर कृषि बजार र उत्पादन को आवश्यकता छ। उदाहरणका लागि, वैज्ञानिकहरू उपयोगी प्रोटिन-भिटामिन उत्पादन तिनीहरूलाई बारी गर्न सक्ने क्षमता संग, एक अद्वितीय रिसाइकिलिंग प्रविधि पेट्रोलियम उत्पादनहरु विकास गरेका छन्। यो उपलब्धि जीवाणु उपभेदों को चयन धन्यवाद आए।
जीव मा चयन के हो? लागू विज्ञान को एक धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र उच्च गुणस्तरीय खाना उत्पादन र आधुनिक उत्पादन को नयाँ प्रकार प्राप्त गर्न एक व्यक्ति सक्षम बनाउँछ।
आर्थिक आवश्यकता, तिनीहरूको प्रकृति र वर्गीकरण
शिक्षाविदों: सूची। को रास को सक्रिय सदस्य। रास को शिक्षाविदों को चुनाव
कसरी काम गर्छ को एक दृश्य के छ
खगोल विज्ञान - यो के हो? अर्थ र खगोल विज्ञान को इतिहास
Windows XP हट कुञ्जी कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्नुहोस्
Ovulation को उत्तेजना: "Clomid"। परिणाम आवेदन
पैसाबारे - यो ... शब्द को सबै
यो श्रृंखला "Sklifosovsky": अभिनेता र भूमिकाको
Krasnogvardiysky जिल्ला (सेन्ट पीटर्सबर्ग): वर्णन, प्रशासन र आकर्षण समीक्षा
विवाह रंग Marsala: सुशील स्टाइलिश र स्वादिष्ट